Sahityabatika: गजल : कसले देख्या छ र ?
गजल : कसले देख्या छ र ?
मुटुभित्र को को छ कसले देख्या छ र ?
आँशु सधैं राको छ कसले देख्या छ र ?
बाहिर हल्ला चलेको छ म पागल भए अरे
कथित पागल भोको छ कसले देख्या छ र ?
तिमी जस्तै नाच्ने गाउने बसन्तको बहारसंगै
मेरोपनि धोको छ कसले देख्या छ र ?
रोगी भइस भन्छन् डाक्टर साथी भाइहरु
कुन ब्यथाले छोको छ कसले देख्या छ र ?